देशभरका नदीहरुमा पानीको सतह बढ्यो, कुन नदीको अवस्था कस्तो ? - Kendrabindu Nepal Online News
देशभरका नदीहरुमा पानीको सतह बढ्यो, कुन नदीको अवस्था कस्तो ?
अविरल वर्षासँगै देशभरका नदी तथा खोलामा पानीको सतह बढेको छ ।
यो समाचार तयार पार्दासम्म देशका बिभिन्न १४ वटा स्थानमा बाढीको जोखिम बढेको छ। बागमती, नारायणी कोशी, कमला, कन्काई लगायतका नदी आसपास सतर्कता अपनाउन बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले आग्रह गरेको छ।
यस्तै बागमती नदीमा पानीको सतहले सतर्कता तह पार गरेकाले रौतहट र सर्लाहीका बासिन्दालाई सुरक्षित ठाउँमा जान महाशाखाले अनुरोध पनि गरेको छ ।
केहि दिनदेखि देशभरी पानी परिरहेको छ । अझै दुई–तीन दिन देशभर भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले एक सूचना जारी गर्दै यो अवधिमा देशको केही स्थानमा भारी वर्षा हुने र एक, दुई स्थानमा अति भारी वर्षासमेत हुने जनाएको हो । मौसमविद्का अनुसार विशेषगरी आज र भोलि यो क्रम जारी रहनेछ ।
कुन नदीको ताजा अवस्था कस्तो ?
विस्तृत हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।